कसरी गर्न सकिन्छ चिया उत्पादन - Nayabulanda.com
प्रमिशा घिमिरे ३० कार्तिक २०७८, मंगलवार २०:३४ 281 पटक हेरिएको
नेपालमा विशेषतः ३ प्रजातिको चिया खेती गरिन्छ । आसामी (Camelia asamica ) र कम्बोडियाली (Camelia asamica spp lasiocalyx) प्रजातिको चिया सिटिसी चिया उत्पादनको लागि प्रयोग हुन्छ भने चिनिया प्रजातिको चिया (Camellia sinesis) मुख्यतया अर्थोडक्स चियाको उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ ।
अर्थोडक्स चिया कस्तो प्रकारको चिया हो ?
कस्तो प्रकारको चियालाई सि.टि.सि.चिया भनिन्छ ?
चिया खेतीका लागि कस्तो हावापानी चाहिन्छ ?
चिया खेतीका लागि कस्तो किसिमको तापक्रम तथा वर्षाको आवश्यकता पर्दछ ?
चिया नर्सरी तथा बगानको लागि कस्तो किसिमको माटो चाहिन्छ ?
चियाखेतीको लागि माटोको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ?
चियाको बिरुवाको प्रसारण कसरी गरिन्छ?
चियाको बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी ब्याडको तयारी कसरी गरिन्छ ?
चियाको नर्सरी कुन समयमा स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ?
चियाको क्लोन तयार गर्न माउबोट कस्तो हुनु पर्दछ ?
चियाको हाँगा/डालाको छनौट कसरी गर्नु पर्दछ ?
चियाको हाँगा/डालाबाट कटिङ्ग कस्तो लिनु पर्दछ ?
चियाको कटिङ्ग कसरी सार्नु पर्दछ ?
नर्सरी बिरुवा हुर्काउन के कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ?
नर्सरीमा भएका बिरुवाहरुलाई जर्खर्याटउन/हार्डेनिङ्ग गर्न जरुरत पर्दछ ?
चिया बगानको लागि कस्तो जमिन चाहिन्छ?
चियाको बिरुवा सार्ने अवस्थामा कस्तो हुनु पर्दछ ?
चियाको बिरुवा रोप्दा रेखाङ्कनको पनि जरुरी हुन्छ ?
चियाको बिरुवा रोप्ने पद्दति अनुसार पनि बिरुवा रोप्ने दुरीमा फरक पर्दछ ?
चियाको बिरुवामा मलखादको व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्दछ ?
चियाको उत्पादन दिईरहेको वयस्क बिरुवालाई कतिसम्म मलखादको आवश्यकता होला ?
चियामा सूक्ष्म तत्वहरु पनि प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ ?
चिया बगानमा सिंचाईको महत्व कतिको रहन्छ र कुन समयमा बढी आवश्यकता हुन्छ?
चिया बगानको झारपातकसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?
चियाको वोटलाई काँटछाँटको पनि आवश्यकता पर्दछ?
चियामा कस्ता-कस्ता रोगहरुले सताउछ
चिया बगानमा देखा पर्ने मुख्य रोगहरुमा फोके मरुवा, रातो सिन्दुरे, कोलर क्याङ्कर, काण्डमा लाग्ने क्याङ्कर, जरा कुहिने रोग मुख्य हुन्। यिनीहरु मध्ये रातो सिन्दुरे, कोलर क्याङ्कर र जरा कुहिने रोगले बढी क्षति पुर्‍याएको पाईन्छ। रातो सिन्दुरे कस्तो खालको रोग हो र यसबाट बिरुवालाई कसरी बचाउन सकिन्छ?
चियामा कोलार क्याङ्कर कस्तो अवस्थामा लाग्दछ र यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
चियामा जरा कुहिने रोग लागेको कसरी थाहा हुन्छ र यसबाट कसरी बिरुवा बचाउन सकिन्छ ?
चियामा कस्ता कस्ता किसिमका कीराहरुले नोक्सानी पुर्यारउँदछन् ?
चियाको सुलसुले कीराले कसरी नोक्सानी पुर्याहउँदछ र यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
थ्रिप्स कीराले चियाको बिरुवालाई कसरी असर पुर्या्उँदछ र यसको नियन्त्रण विधि के होला ?
चियाको लुपर कीरालाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छर यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?
पात बटार्ने कीराले चिया पत्ती कसरी नोक्सानी पुर्‍याउछ र यसको नियन्त्रण विधि के होला ?
यस कीराको वयस्क पनि रात्रिचर पुतली नै हो । लाभ्रेहरुले चियाको पात बटार्छन र रेशमी जालोले त्यसलाई जोड्दछन्। बटारिएका पातहरु भित्र लाभ्रे भेटिन्छ । बेरिएका पातहरु टिपाई योग्य हुँदैनन् । यी कीराहरु थौरै संख्यामा छन् भने विषादि छर्नु पर्दैन किनकी यसका प्राकृतिक शत्रुहरुले नै नाश गर्दछन् । प्रकोप बढी भएको खण्डमा नीमजन्य विषादि वा एन.पि.भी. १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्नु पर्दछ ।